सम्पूर्ण पाठकवृन्दहरु जो विविध कार्यक्रममा ढुक्क भएर बोल्न चाहना राख्ने व्यक्तिहरुका लागि सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले यस सम्बन्धी आफ्ना केही अनुभव तथा धारणाहरु यस लेखमार्फत् प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु। आशा छ यसलाई पढेर केही आफ्नो बोल्ने कलामा विकास गर्नुहुनेछ।
सर्वप्रथम त एक कुशल उद्घोषक बन्नका लागि 6W1H को ज्ञान हुनु नितान्त आवश्यक छ। 6W1H भनेको नेपालीमा छ ‘क’ भन्ने बुझिन्छ।
आउनुहोस् चर्चा गरौं छ ‘क’ भनेको के हो भन्ने सम्बन्धमा जसरी 5W भनेको What– Where – When – Who- Why – र How – भन्ने अर्थ लाग्छ। नेपालीमा छ ‘क’ भन्नाले कार्यक्रमको के हो ? कार्यक्रम कहाँ हुँदैछ ? कार्यक्रम कहिले हुँदैछ ? कार्यक्रमको आयोजक तथा प्रायोजक को हो ? कार्यक्रम कसरी हुँदैछ भन्ने कुराको ज्ञान एक कुशल कार्यक्रम उद्घोषकमा हुनुपर्छ। कार्यक्रमको सुरुवातमा नै यी ६ वटा प्रश्नको उत्तरको आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ। 5W1H को आधारमा कार्यक्रम चलाउँदा प्रस्तुत गरिने सानो उदाहरण ‘नमस्कार, आज मिति २०७८/०५/०१ शनिबारका दिन। यस ह्याप्पी लाइफ एजुकेसन एण्ड ट्रेनिङ ईन्स्टिच्युट प्रा. लि.को आयोजनामा हुन गइरहेको ग्रामीण भेगमा बस्ने एकल तथा असहाय महिलाको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको १५ दिने सिलाई बुनाई तालिमको समुद्घाटन समारोहमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरुमा म कार्यक्रम सञ्चालक ‘ को तर्फबाट न्यानो न्यानो अभिवादन’।)
आसनग्रहणपछि आसन गरिसकेका सबै अतिथि वर्गलगायत मञ्चको अगाडि बसेकाहरुलाई ब्याच वितरण गर्नुपर्छ। ब्याच वितरण गर्दा वितरकहरु महिला हुनु राम्रो मानिन्छ। ब्याच वितरण भइरहेको बेलामा उद्घोषकले आफ्नो कार्यक्रमको भूमिका बाँध्न पाइन्छ। ब्याच वितरण सकिएपछाडि स्वागत गीत/राष्ट्रिय गीत/ वा प्रार्थना प्रस्तुत गर्नुपर्छ, आफूसँग जे उपलब्ध छ। त्यही प्रस्तुत गर्नुहोस्। त्यसपछि कार्यक्रमबारे जानकारी र स्वागत मन्तव्य राखिदिनका लागि मञ्चमा आशन ग्रहण गरिरहनुभएका कार्यक्रम संयोजकलाई बोलाउनुपर्छ। त्यसपश्चात कार्यक्रमको विधिवत् रुपमा कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनुहुन प्रमुख अतिथिलाई अनुरोध गर्नु पर्दछ। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्ने तरिकाहरु फरक/फरक हुन सक्दछन्। कतै माइक्रोफोन अन गरेर गरिन्छ। कतै पानसमा दीप प्रज्वलन गरेर गरिन्छ भने कतै-कतै रिबन काटेर गरिन्छ। कार्यक्रममा उद्घाटन मन्तव्य राखिदिनुहुन प्रमुख अतिथिलाई अनुरोध गर्नुपर्दछ। बीच-बीचमा विविध प्रस्तुतिहरु भएमा राख्न पनि सकिन्छ। अन्त्यमा कार्यक्रमको विधिवत्रुपमा समापन भएको जानकारी दिनका लागि कार्यक्रमका सभापतिलाई अनुरोध गर्दै कार्यक्रम सञ्चालक बिदा हुनुपर्दछ।
अन्त्यमा, कार्यक्रममा विविध मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरु पनि राख्नुपर्दछ। दर्शकले मन्तव्यमात्र पनि मन पराउँदैनन्। कार्यक्रम उद्घोषक केटा भएमा ख् आकारमा उभिनु पर्छ। महिला उद्घोषक भए ी आकारमा उभिनु पर्दछ। उद्घोषकले आफ्नो ड्रेसअपमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्दछ। सर्ट र पाइन्ट आइरन गरेको र टाइसुट हुनु पनि आवश्यक छ। माइक्रोफोन समाउँदा तारलाई अलिकति बटारेर मुखबाट माइक्रोको दुरी ६ औला हुनुपर्दछ। उद्घोषक भइसकेपछाडि मासको अगाडि बोल्न डराउँनुहुँदैन।
प्रकाशित मिति २१ भाद्र २०७८, सोमबार १८:४९